Homeसमाचारइटालीमा स्थिति झन् भयावह ! कोरोनाबाट २४ घण्टामै ७९३ काे मृ’त्यु
March 22, 2020 Spnews समाचार Comments Off on इटालीमा स्थिति झन् भयावह ! कोरोनाबाट २४ घण्टामै ७९३ काे मृ’त्यु
काेराेना भाइरसबाट इटालीमा सबैभन्दा धेरैकाे मृ’त्यु भएकाे छ । काेराेनाकाे उद्गम स्थल चीन भए तापनि चीनमा भन्दा इटालीमा १ हजार ५७० जना बढीले काेराेनाकाे संक्रमणबाट ज्या’न गु’माएका छन् ।
वर्ल्डो मिटरर्स डट इन्फोका अनुसार अहिले इटालीमा कोरोना भाइरसको कारण ज्या’न गु’माउनेको संख्या ४ हजार ८२५ पुगेको छ भने चीनमा ३ हजार २५५ रहेको छ । अहिले काेराेनाबाट संक्रमितकाे संख्या पनि इटालीमै बढी छ । चीनमा अहिले ६ हजार १३ जनामा मात्रै काेराेनाकाे संक्रमण छ भने इटालीमा ४२ हजार ६४१ जना काेराेनाबाट संक्रमित छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामै इटालीमा ७९३ जनाको मृ’त्यु भएको छ भने ६ हजार ५५७ जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । केही दिनयता इटालीमा प्रत्येक दिन कोरोना भाइरसबाट म’र्नेको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
पशुपतिमा हुने आरतीमा आउने भक्तजनलाई सहभागी नहुन आग्रह